I-Ultimate Email Marketing Cheatsheet | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 21, 2013 NgoMsombuluko, Okthoba 21, 2013 UKelsey Cox
Kunamasu amaningi nemikhuba ongakhetha kuyo uma ucabanga ngendlela yakho imeyili nokumaketha kokuqukethwe. Abathengisi abaningi be-imeyili abasebenza kahle basebenzisa amaqhinga ahlukile njengamasu, isikhathi, ukuhlolwa, nokwenza kahle ukuklama, kepha iliphi iqhinga eletha imiphumela emihle kakhulu? Yikuphi okufanele ugxile kukho ngaphezu kokunye?
Ngabadlali abajwayelekile abachitha isikhathi sabo esiningi ekuthuthukiseni ubuciko (23%) uma kuqhathaniswa nabadlali abaphezulu abanikela ngesikhathi sabo sonke kucebo (22%), kusobala ukuthi ukulethwa kungabaluleka kakhulu - uma kungenjalo ngaphezu kokuqukethwe wena ' ukuhlinzeka kabusha.
Cabanga, isibonelo, ukuthi ama-72% wabo bonke abathengisi bavivinya imigqa yezihloko zama-imeyili abo ngaphambi kokuthumela ezinhlwini zabo zokusabalalisa, kuyilapho kuphela u-15% ohlola ukwakheka kweselula kwama-imeyili nesibonisi sesithombe. Ngenxa yokuthi ama-75% wabanikazi be-smartphone “banamathuba amaningi” okususa ama-imeyili abangawafundi kalula kumafoni abo, ukwehluleka ukubheka inzuzo yokwandisa iselula kungaholela ekulahlekelweni okukhulu emikhankasweni ngayinye, ingasaphathwa eyokuthi ngaphesheya kwecebo lomkhiqizo jikelele.
Lesi ngesinye sezici eziningi okufanele uzicabangele lapho ufuna ukuthuthukisa ukusebenza kwakho kwe-imeyili. Ngenhlanhla, Marketo uhlanganise okusebenzisekayo ”i-imeyili cheatsheet”Ukuze sibhekise kuyo ngethemba lokuthuthukisa nokulungisa isu lethu le-imeyili:
Tags: imeyili MarketingI-Marketing Infographics